सायद गिरिजाबाबु भएको भए अहिलेसम्म सबै समस्याको समाधान भैसक्थ्यो : रामचन्द्र पौडेल |
गिरिजाबाबु भएको भए अहिलेसम्म सबै समस्याको समाधान भैसक्थ्यो : रामचन्द्र पौडेल
2017/03/20 5:46:34 PM
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्वर्गीय गिरिजाबाबुको अहिले अभाव खट्कीरहेको बताएका छन्। उनले गिरिजाबाबु भएको भए शान्ति लोकतन्त्रले पुर्णता पाउथ्यो कि भनेर अझैपनि सम्झना आईरहेको बताएका छन्। गिरिजाबाबुको ७ औं स्मृति दिवसका अवसरमा पत्रकार ऋषि धमलाले नेता पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
गिरिजाप्रसाद कोईरालाई कसरी सम्झिनु हुन्छ ?
उहाँको अभाव खट्कीरहेको आभाष भएको छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र लगायत कामहरूको संस्थागत नहुँदै उहाँको निधन भएको छ । शान्ति प्रक्रिया पुरा भएको छैन। अझैपनि मुलुकले शान्तिको सास फेर्न पाएको छैन्। गिरिजाबाबु भएको भए शान्ति लोकतन्त्रले पुर्णता पाउथ्यो कि भनेर अझैपनि हामीलाई सम्झना आईरहन्छ ।
तपाई गिरिजाप्रसाद कोईरालाको नजिक रहेर काम गरेको नेता पनि हो, आज आएर उहाँले स्थापना गर्नुभएको गणतन्त्र धरापमा पर्न थालेको हो ?
मैले उँहासँग निक्कै नजिक रहेर काम गर्ने अवसर पाए। सँगै बसेर काम गरेको थिए । उँहा ज्यादै सोचेर गमेर साथीहरूको सुझाव लिएर अघि बढ्ने काम गर्नुहुन्थ्यो । शान्ति स्थापनाको लागि उँहालाई हामीले पनि सुझाव दिएका थियौँँ। राजा आफै शासन गरिरहेका थिए । राजदरबारले हिँसालाई वास्ता गरेनन्। पछि तहलगाउने बाटोमा गएर मार्न थाले । यो कुनैपनि हालतमा हिँसा रोक्नुपर्छ भनेर उहाँ अघि बढ्नु भयो । स्वयम म पनि थिए । शान्ति सम्झौता भयो । आज आएर संविधान आयो । यसैलाई स्थापित गर्ने र शान्ति कायम गर्नेमा हामी छौँ । तर शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि हामी सफल भएका छैनौ ।
कसको कारण शान्ति प्रक्रियाले स्थायित्व नपाएको हो ?
सायद गिरिजाबाबु भएको भए, निकासको बाटो आउँथ्यो तर आज उहाँ सभापति वा प्रधानमन्त्री भएको भए हाम्रो मुलुक यो स्थितिमा हुने थिएन कि ?
काँग्रेस सबै भन्दा ठुलो पार्टी भएर पनि प्रभावकारी भूमिका देखिएन नि ?
काँग्रेस र सभापति पनि लाग्नु भएको छ। मधेशी मोर्चाका केही मागहरूपुरा नभएको भन्ने कुरा छ । यि मागलाई सम्बाधेन गर्ने तर्फ नभएको पनि होईन तर आज आएर यि सबै कुरामा ध्यानदिएर काम गर्नेकाम काँगे्रस त्यति सफल भएको देखिदैन्। मोर्चा सरकार र प्रतिपक्षसँगै राखेर कसिलो कुरा कानि गर्नको लागि काँग्रेसले भूमिका खेल्नु पर्ने हो तयो भएन । म अचानक जापान पुगेको बेला सदनमा पेस भयो तर आज आएर अलपत्र परेको जस्तै भएको छ। संशोधनलाई हुन्ै पर्छ र हुनैहुँदैनमा विभाजित गरिएको छ । यसरी त निकास निस्कदैन नि । मोर्चाले हुनैपर्छ भन्ने एमाले कुनै हालतमा संशोधन गर्न नदिनेमा छ । यस्तो संकट आएको छ ।
कार्यदल बनाएर सहमतिका लागि काम गरिरहनु भएको छ नि ?
अब हामी कहि न कही निकास निकाल्नै पर्छ । मिलन विन्दुको खोजिमा छौँ। मोर्चालाई हाम्रो भनाई के हो भने, उहाँहरूका मागहरूलाई सम्बोधन गरेर निर्वाचनमा जाने कोसिस गर्ने हो भने, उहाँहरू निर्वाचनमा आउने वातावण बन्छ । तर उहाँहरू खुलस्त यति भए हुन्छ नभए हुँदैन पनि नभन्ने । मुलुक अराजकता तिर जाने स्थिति आएको छ। एमाले पार्टीलाई पनि हामीले भनेकै छौँ कि कुनै कुरामा गम्भिरता छ भने त्यसलाई मन्थन गरौँ भनेर भनेकै हो । वित्यासै पार्ने कुरा के छ त्यो पनि भन्नुपर्यो । एमाले यो कुरा सुन्दै नसुन्ने ।
अब काँग्रेस निर्वाचनमा जान्छ यात संशोधनलाई अघि बढाउँछ ?
संशोधन र निर्वानमा अघि जानुपर्छ । निर्वाचन कुनैपनि हालतमा रोक्नु हुँदैन। मुलुकलाई ब्यालेटको बाटोमा हिडाउँनु पर्छ। अब ढुङ्गा मुडाको आन्दोलन गर्ने दिन सकिए । पहिलो चरणको स्थानिय तहको निर्वाचन गर्नमा एक जुट हुनुपर्छ। जनतालाई दिएको अधिकार दिएको छ । गाउँलाई अधिकार दिएको छ । हिमाल पहाड मधेश सबै ठाउँमा गएको तर नेताहरूलाई त्यो अधिकार गएको मन परेको छैन्। अपाच्य भएको छ जस्तो गर्नु भएको छ। जनताका अधिकारलाई राज्यले दिएको अधिकार आफ्ुले बोकेर जादा केही नपाएर हो कि ? प्रदेशको अधिनमा गाउँ रहन्छ । उपेन्द्र यादवसँग मैले धेरै कुरा गर्नु भएको थियो । स्वायत्तताको कुरामा सहमत हुनुहुन्थ्यो । आज आएर किन यस्तो बोल्दै हुनुहन्छ खै ?
मधेशी मोर्चाले त केन्द्रको चुनाव पहिले गरौँ भनेको छ नि ?
जनतालाई दिएको अधिकार उहाँलाई पचेको छैन। यो यूनिक छ । स्वीजरल्याण्डको जस्तो कल्पना गरिएको छ । सबै अधिकार जनतालाई दिएपछि आफ्नो विकास आफै गरुन भनेर दिएको स्थितिमा उपेन्द्र जीलाई पाच्य भएन ।
मधेशी मोर्चालाई मनाउन सक्नु भएन नि ?
नमान्ने उहाँहरूनै हो । जनतालाई अधिकार दिन उहाँहरू तयार हुुनहुन्न ।
तर मधेश मोर्चाले निर्वाचन बिथोल्ने भनेको छ नि ?
हो नि । त्यो भनेको मधेशका जनतालाई अधिकार नदिने भनेको हो ।
नेपाली काँग्रेसको आगामी केन्द्रय वैठकले के के गर्ने निर्णय गर्छ ?
मैले हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता सबैलाई भनेको छु । हामी जनताको बीचमा जाउ । जनतालाई बुझाउँ । तपाईको अधिकार संविधानले दिएको छ भनेर भनौ भनेर भन्दा पार्टीले तयो गर्न सकेको छैन् ।
निर्वाचन आयोगले वातावरण बनेन भनेर भनिसक्यो ?
मलाई पनि शंका हुन थाल्यो । एकाएक मतपत्र छाप्न किन रोकियो ? यस्ता कुरा आउनु राम्रो होईन। यस्ता कुरा शंका हुँदैछ ।
त्यसो भए बैशाख ३१ मा निर्वाचन हुँदैन ?
म अहिले नै यस्तो भनिदिन ।
सभापतिसँग कुनै कुरा भएको छैन् ?
मैले कुरा गर्छु । ईलाम छु । म बुझ्दै छु ।
केन्द्रिय वैठकमा के एजेण्डा लिएर जानु हुन्छ नि ?
काँग्रेसको मुल्य मान्यता, निती निर्धारणा गर्नुपर्छ। राष्ट्रको नेतृत्व लिनुपर्छ । संविधानले दिएका अधिकारहरू जनतालाई बुझाउनु पर्छ । केन्द्रिय वैठकबाट काँग्रेसले मुख्य भूमिकामा रहने गरि अघि बढ्छ ।